Kulan ku aadanaa Doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin Nabadgeliyada oo Boosaaos ka dhacay sawiro+Dhagayso – SBC
Kulan ku aadanaa Doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin Nabadgeliyada oo Boosaaos ka dhacay sawiro+Dhagayso
Nabadoono Culimo, dhalinyarada qeybaheeda kala duwan iyo masuuliyiintooda, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida Haweenka ayaa isugu yimid maanta kulan ka dhacay hoolka dowlada hoose ee magaalada Boosaaso.
Kulankan oo uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Bari Mustafe Majacase ayaa waxaa looga hadlayay arimo ku aadan doorka dhalinyarada reer Boosaaso ku leeyihiin adkeynta Amaanka iyo ka hortaga waxyaabaha amaan darida keeni kara.
Dhinacyadii kala duwanaa ee kulankaasi ku sugnaa ayaa hadalo kala duwan ka soo kala jeediyay kulanka waxayna xooga saareen dhalinyarada in doorka ugu muhiimsan ay ku leeyihiin nabadgeliyada iyo adkeynteeda.
Mustafe C/raxmaan Xasan Majacase gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Bari ayaa isagu halkaasi ka sheegay in dhalinyarada guud ahaan ku dhaqan Puntland gaar ahaan gobolka Bari ay doorkooda kaga aadan nabadgeliyada ka qaataan kuna dadaalayaan adkeynta Amaanka iyo ka shaqeynta Hanaanka Dimuqraadiyada ee haatan Puntland u gudubtay.
Qaarkood Culimaa udiinkii ku sugnaa kulankaas ayaa hadalo khiimo badan oo baraarujin iyo waanaba isugu jira halkaasi ugaga jeediyay dhalinyaradii ka soo qeyb gashay iyagoo uga faalooday amniga iyo faaiidooyinka uu u leeyahay Nolosha .
Sheekh Cismaan waxa uu dhalinyarada ugu booriyay in ay ka shaqeeyaan Nabadda iyo Amaanka nabad la aanina ay nolol ahaan tahay .
Dhalinyaro isugu jira Rag iyo Haween ayaa iyana halkaasi ka soo kala jeediyay hadalo ku aadan doorkooda ay ka qaataan nabad geliyada iyo ka hortaga waxyaabaha wax u dhimaya nabadda, balan qaadayna in ay had iyo jeer u taagnaanayaan ka shaqeynta amniga iyo horumarka dalka .
Riix halkaan si aad udhahagaysato hadaladada masuuliyiinti iyo dhalintii kahadashay kulankaasi